“एक आभा, एक आशा” – कुलमान घिसिङ | Nepal Online Patrika
Home आर्थिक “एक आभा, एक आशा” – कुलमान घिसिङ
“एक आभा, एक आशा” – कुलमान घिसिङ
Nepal Online Patrika | Kathmandu: निस्वार्थ अनि निर्भिक, दृढ अनि तिक्ष्ण, तिब्र अनि गतिशिल । यी तमाम उर्जा–तत्वको एकढिक्का पुञ्जले धपक्कै बलेको त्यो अनुहार । न दम्भ, न अहंकार । शालिन, सौम्य र सरल । अर्थात कुलमान घिसिङ ।
आफ्नै कर्म, लगाव र सर्मपणले श्रेष्ठ बनायो, उनलाई । आज तीन करोड नेपालीको स्पन्दनमा उनको जीवन–संगीतको धुन बज्छ । कुलमान घिसिङले कसरी आर्जन गरे यतिविध्न प्रेम र श्रद्धा ? कुनै प्रतियोगिता जितेर यस्तो श्रेष्ठता हासिल गरेका होइनन् । मनग्ये दान–दक्षिणा दिएर यस्तो यश कमाएका होइनन् । नेतागिरी गरेर, हिरोइज्म देखाएर, धन–वैभव प्रदर्शन गरेर यस्तो इमान बटुलेका होइनन् । त्यसो भए उनले के गरे ?
उनले त्यस्तो केही गरेनन्, जो उनी अघिका हर्ताकर्ताहरुले गरे । उनले त त्यती मात्र गरे, जो उनको जिम्मेवारी थियो । अर्थात आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्णताका साथ पुरा गरे । श्रीमदभागवत गीतामा एउटा वाक्यांश छ, ‘योगः कर्मशु कौशलम् ।’ जब कामप्रति गहिरो अभिरुची हुन्छ, तब कर्ममा कुशलता प्राप्त हुन्छ । अतः यसका निम्ति कर्ममा एकसाथ मन, बुद्धि र शरीर (क्रिया) तीन वटा कुरा समावेश हुनुपर्छ । कुलमानले यसरी नै आफ्नो कामलाई कुशलतापूर्वक गरे ।
कुलमान आउनुअघि त्यो कुर्सीमा अरु आए, गए । तर, तिनीहरुले कुर्सीको इमान जोगाएनन् । बरु आफ्नो दायित्वबाट विमुख भए । एउटा धूर्त जत्थाको लुकामारीमा भुलेर मुलुकलाई आँध्यारो बनाए । अकुत धन–दौलत थुपारे । त्यही कृत्यको कारण आज उनीहरुको अनुहारको चमक हरयो, जसरी हिजो मुलुकको उज्यालो हराएको थियो । चरम ग्लानी, भय, पछुतो र अपराधबोधले कक्रक्क गले ।
तर, कुलमान घिसिङ?
उनको अनुहार त ओजपूर्ण र दिव्य छ । सगर्वले चौडा छ छाती । कार्य–कौशलले नृत्यवत् छ शरीरका अवयवहरु । लोभ, मोह, भय, कुष्ठा जस्ता विकारबाट मुक्त उनी एक कर्मयोगी हुन् ।
लोडसेडिङ : एक कालो साम्राज्य
लोडसेडिङको तालिका हेरेर भात पकाउनुपर्ने । बत्ती आउने पालो कुरेर काम गर्नुपर्ने । उज्यालो पर्खेर लेखपढ गर्नुपर्ने । बिजुली–बत्ती नहुँदाका दिनहरु कति उराठलाग्दो ? कति उकुसमुकुस ? कति छटपटी ?
र, यसैले पैदा गरिदिए चिन्ता, निरासा, डिप्रेसन, पलायन अनि आत्महत्या ।
कतिको कार्य–तालिका विथोलियो । कतिको उद्योग–धन्दा चौपट भयो । कतिको औषधि–उपचार छुट्यो । कतिको पढाई बिग्रियो । कतिको गाँस खोसियो । गहिरो अनिश्चिता र अन्धकारले खर्लप्प निल्यो मुलुककै खुसी, उमंग, उर्जा । कर्मठ हातहरु लुला भए । जाँगरिला मनहरु शिथिल भए । उर्बर मस्तिष्कहरु पलायन भए । मुलुक मरुभूमी भए ।
यो अँध्यारो साम्राज्यभित्र एक जत्था धूर्त भने जागा रहे, जो जेनसेट (क्याटिभ प्लान्ट) देखि जेनेरेटर, सोलार, इन्र्भटर लगायतका धन्दामा सल्बलाइरहे । यसमा धुर्त कर्मचारी, दलाल व्यापारीदेखि भ्रष्ट नेता–मन्त्रीहरुसम्मले आपसमा कानेखुसी र अंकमाल गरे । त्रस्त र निरास समाजमाथि उपरखुट्टी लगाएर ‘उज्यालोको’ मोलमोलाई गरिरहे ।
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा ६ सय मेगावटभन्दा बढीको जेनसेट जडान गरी प्रति युनिट ३५ रुपैयाँमा बिद्युत बेचे । आव ०७२÷७३ मा मात्र तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको विद्युतिय जेनेरेटर बेचे । सोही अवधीमा १२ लाख २५ हजार थान त इन्भर्टर नै नेपाल ल्याएर बेचे । तीन अर्ब रुपैयाँ बढीको जेनेरेटर बेचे ।
विज्ञहरु भन्छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रणाली सञ्चालक र व्यवस्थापकले अनियमित रुपमा सीमित उद्योग, हुनेखाने, पहुँचगवालालाई विद्युत दिएर सर्वसाधरणलाई भने १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा राखे ।’ यिनीहरुले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई नै यस्तो जटिल र असहज बनाइदिए कि, सर्वसाधरणका लागि उज्यालो एक मृगतृष्णा भइदियो ।
एक कर्मयोगीको पर्दापण
‘अराजकता, भ्रष्टचार, बेथीति, हिंसा, बलात्कार सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । तर, तपाईंले यसलाई अरु आश्रय र बढाव दिनुभयो । यसकारण कि, सर्वसाधरणको चित्कार र पीडाभन्दा तपाईंको निम्ती कुर्सी प्यारो थियो’ एक टेलिभिजन प्रस्तोता स–प्रमाण मूख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँछन् ।
मूख्यमन्त्री आक्रोसित भावमा भन्छन्, ‘मेरो कुर्सीमा आगोको राप छ, मेरो टाउकोमा तिखा किलाहरु छन् । मकहाँ दिनदिनै यस्ता समस्या लिएर कति आउँछन् कति । उनीहरुको कारण म वेचैन र चिन्तित छु । के यहाँ बसेर अन्र्तवार्ता लिएजस्तो सजिलो ठान्छौं ?’ उनी चुनौती दिन्छन्, ‘एक दिन, मात्र एक दिनका लागि सिएम बनेर देखाउ । त्यसबेला म यसैगरी तिम्रो अन्र्तवार्ता लिनेछु ।’
अन्ततः टेलिभिजन प्रस्तोता २४ घण्टाका निम्ति राज्यमन्त्री बन्छन् । दृढतापूर्वक अनि तिब्रताका साथ आफ्नो काममा खटिन्छन् । आखिर तोकिएकै अवधिभित्र जादुयी ढंगले सम्पूर्ण बेथीति हटाउँछन् । नयाँ व्यवस्थाको आरम्भ गर्छन् ।
हिन्दी चलचित्र ‘नायक’को सार हो यो । कुनैपनि प्रणालीलाई जटिल र अहसज बनाएर झुट अनि लुटको धन्दा चलाउनेहरुलाई यसले नाङ्गेझार बनाएको छ ।
केही बर्षअघिसम्म विद्युत प्राधिकरणले यस्तै कुटिल चालबाजी खेलिरहेको थियो ।
पुग्दो विद्युत छैन ।
पानी सुकेका कारण विद्युत उत्पादन भएन ।
१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ ।
उपभोक्ताले धेरै बिजुली खपत नगरौ
तर त्यही कुर्सीमा जब कुलमान घिसिङ बस्न आइपुगे उनले उमंगमय उद्घोष गरे, ‘धक फुकाएर बिजुली बाल्नुहोस् ।’
२०७३ साल । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भए । तिहारको संयोग । मुलुकमा सर्वाधिक विद्युत खपत हुने दिन, लक्ष्मीपूजा । सबै पेशा÷व्यवसायी चाडपर्वको मुडमा फुर्सदिला दिन कटाउने मेलोमेसोमा लागे । तर, कुलमानको ध्याउन्न एउटै कुरमा थियो, ‘कसरी तिहारमा मुलुकभर निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्ने ?’
बितेका बर्षहरुमा तिहार अन्धकारमै गुज्रियो । सर्बसाधरणमा एक किसिमको भय र बेचैनी थियो, ‘यसपाली पनि त्यस्तै होला ।’ तर, त्यसो भएन ।
न चाडपर्व, न घर–परिवार, न बिदा, न सुविधा । कुलमान घिसिङ रातभर जाग्रम बसे । सबै तिहारको मादक माहौलमा रमाइरहेका बेला उनी स्युाचाटारस्थित प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रमा पुगे । विभिन्न वितरण केन्द्रहरुमा पुगे र त्यहाँका प्राविधिक अवस्था जाँच गरे । जहाँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुन्छ, त्यहाँ मर्मतका लागि तत्काल दौडिने जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखे ।
जुन दिन सर्वसाधरण घरमा धन–ऐश्वर्य भित्र्याउने कामना सहित दियो–बत्ती जलाउँदै थिए, त्यही दिन कुलमानले सबैको घर–आँगन धपक्कै बालिदिए ।त्यसपछिका दिनमा विद्युत प्राधिकरणको शब्दकोषबाट नै हट्यो, लोडसेडिङ ।
कुलमानलाई बर्षौंदेखि गाँठो परेको एउटा प्रश्न सोधिने गर्छ, ‘कसरी हटाउनुभयो लोडसेडिङ ?’ उनको जवाफ सरल छ, ‘हाम्रा आयोजनाहरुबाट जति विद्युत उत्पादन हुन्छन्, त्यस अनुरुप माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाइएको हो ।’ उनी आफुले जादु गरे भन्ठान्दैनन् । उनी त के मात्र भन्छन् भने, ‘मैलै आफ्नो काम इमान्दार र कुशलतापूर्वक गरेको हुँ ।’
कुलमान घिसिङ निर्धक्कसाथ भनिरहेका छन्, ‘मनग्ये बिजुली बाल्नुहोस् ।’ त्यती मात्र होइन, हरेक घर र मुलुकलाई नै विद्युतमैत्री बनाएर छलाङ मार्ने तत्परता देखिन्छ उनको कार्यशैलीमा ।
Previous article‘साथीसँग भेट्दा मास्क लगाउनु पर्दैन’ भन्ने सोचले ठूलो खतरा निम्त्याइरहेको छ’
Next articleनयाँ राहदानी नियमावली अनुसार अब महानगरपालिका प्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि कूटनीतिक राहदानी
शनिबार १२०४ कोरोना संक्रमित थपिँदा १४४७ जना डिस्चार्ज
दोस्रो पटक नेपाली झण्डा फहराउँदै संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा